Amiin Caamir - Safari Phone
Dareenka ayaa igu hoggaamiya in aan sidaas wax u sawiro'
Fanka, qofba si ayuu bulshada ugu soo bandhigaa fikarkiisa, isagoo adeegsanaya aqoon, waayo-aragnimo iyo farsamo u gaar ah. Qayb ka mid ah fanka waa farshaxanka �Kartuunka� oo Soomaalida dhowaan-gal ku ah, kaas oo qayb ka ah moorada ballaaran ee fanka, iyadoo nolosha casriga ah ee dunida maanta uu noqday aalad sarreysa oo loo adeegsado dhinaca warbaahinta �Media�.
Soomaali ahaan, marka la soo hadal qaado Kartuun waxaa isla markiiba maskaxda ku soo dhaca ninka lagu magacaabo Amiin Caamir. Wixii ka dambeeyey 1970 ayaa soo bandhigga Kartuunku ka hirgashay dalka, wuxuuna noqday qaab loo adeegsado wax u sheegidda iyo baraarujinta dadweynaha, gaar ahaan xilligii Kacaanka. Amiin Caamir wuxuu ka mid yahay dadka kooban oo Soomaalida, Kartuunka looga dambeeyo, waana badan yihiin dadka markay maqlaan �Kartuun� soo xusuusta magaca Amiin Caamir. Goobaha lagu soo bandhigo farshaxanka, Tiyaatarada, Wargeysyada, Matxafka, Buugta, waraaqaha derbiyada iyo xayeysiinta iwm, intaba waxay ahaayeen fagaarayaal uu caan ka dhex yahay Amiin Caamir, intii la joogay dalkii Soomaaliya.
Amiin Caamir waa qoraa sawirada Kartuunka. Wuxuu awood weyn u leeyahay in uu hal sawir oo kooban ku muujiyo wax qoraal kale ku qaadan lahaa bogag aan yarayn.�Kartuunka waa ka sareeyaa oraahda, maxaa yeelay sawirku wuxuu gudbi karaa degaanno kala fog, kuna kala duwan hidde, dhaqan iyo afba� waxaa yiri Amiin Caamir. Wuxuu ku nool yahay dalka Kanada, magaalada Toronto. Wuxuu halkaas ku leeyahay Stuudiyo, wuxuuna ku howlan yahay bandhigyo farshaxan, u badan dhinaca hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo uu ka dhigo dalka Kanada. Waxaa la shaqeysa gabadhiisa oo iyaduna hibo u leh dhinaca Sawirada (Photograpy) iyo adeegsiga Kombiyuutarka. Hal-abuuradiisadhinaca Kartuunka waxay joogto ugu soo baxaan wargeyska Kasmo. Khaalid Macow oo dhowaan socdaal howleed ku tegay dalka Kanada ayaa weydiiyey Amiin Caamir su�aalahaan:
S: Wax ma nooga sheegi kartaa noloshaada iyo sida aad ku bilowday farshaxanka?
J: Anigu waxaan la fil ahay xoriyadda, waxaana dhashay sannadkii 1960kii. Waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho. Ma sheegi karo waqti xaddidan oo aan fanka bilaabay, waxaanse ogahay anigoo aad u yar oo dhigta dugsi qur�aan, in aan bilaabay jacaylka sawirka. Waxaan xusuustaa in la iiga maara-waayey in looxa aan ku dhigan jiray �Alif wax ma leh� aan u adeegsan jiray sawiro, halkaasna mararka qaarkood ku mutaysan jiray ciqaab. Waxaa kaloo jiray in derbiyada xaafadda aan deganahay aan ku sawiri jiray sawiro dad iyo xayawaanba anigoo adeegsanaayo dhuxusha.
S: Sawiradaas ma jecleysan jiray oo dadku ma ku dhiiri-gelin jireen?
J: Waa kala duwanayd. Dadku qaar baa aabbahay u dacwoon jiray oo mararka qaarkood waxaan mutaysan jiray canaan. Laakin waxaa jiray qaar aad u jeclaa oo ii keeni jiray warqado ama alwaax in aan ugu sameeyo. Sawiradayda dadka jecel waxay u badnaayeen dhallinyaradda xaafadda iyo ardayda dugsiyada dhigta.
S: Waalidku ma kugu dhiiri-gelin jiray?
J: Aabbahay markuu arkay dacwooyinka badan ee ka imaanaya dadka leh guryaha derbiyada aan wax ku soo sawiro, isla markaas isagoo ku fekeraya in la iiga amaan helo derbiyada islaameed, waxay qasab ku noqotay in uu ii soo gado qalabka farshaxanka, sida waraaqo iyo qalmaan midibo leh. Wuxuu i dhihi jiray: banaanka ha u bixin oo halkaan ku sawir wixii aad rabto�.
S: Dugsiga xaggee ku soo dhigatay?
J: Waxaan bilaabay aniga oo aan gaarin xilligii caruurta lagu geyn jiray, waxaana sabab u ahaa maalin maalmaha ka mid ah ayaan wiil dugsiga Villaagio Arabo dhigta oo ah xaafaddii aanu deganeeyn ayaan u sameeyey sawir xayawaan kala duwan. Saaxiibkey markii la weydiiyey qofkii sameeyey, wuxuu sheegay in wiil yari u sameeyey. Markaas ayaa waxaa wada kulmay Maccalinkii oo hore ugu arkay derbiyada Sawiradii aan sameeyey, hase ahaatee aan aqoon magaceyga. Durbadiiba Maccalinkii ayaa weydiiyey dugsiga aan dhigto, waxaana loo sheegay in aan wiil yar ahay oo aanan weli gaarin xilligii dugsiga.
Sidaasna waxaa isku bartay aabbahay iyo macallin Masri ah oo markaas doonayey in uu I arko. Meeshaas ayaan ka bilaabay dugsiga, waxaana noqday wiil la tartama dhinaca sawirka ardayda fasaladii iga sare. Marka wax qor la I yiraahdo oo aan garanwaayo qoraalka, waan sawiri jiray, iyadaana ii fududayd.
S: Laakiin khibrad weyn baad heshay, sidee?
J: Waxaan dhashay xilli dalka uu markaas xornimo qaatay oo dalka wax badan ku cusub yihiin. Waxaan noqday nin nasiib badan. Maxaa yeelay, in aan aqaanay gaar ahaan farsamada xardhidda (Graphic Design) iyo gaar ahaan Kartuunka waxaan ku bartay waayo aragnimo. Ma jirin xilligaas sanooyin taqasuus gaar ah ee waxbarasho ama awood badan oo aqoon lagu dhaalacdo kutub ama dugsi gaar ah oo laga barto fanka. Waxaan helay nasiib in aan la shaqeeyo Farshaxan Ruush ah ah xilligaas loo keenay dalka in uu Wasaaradda Warfaafinta gacan ka siiyo dhinaca Madbacada Qaranka. Ninkaas ayaan ka faa�iideystay farsamada Graphic Arts-ka, ka dibna waxaa is baranay nin kale oo Talyaani ah oo isna goor dambe la keenay Madbacadda.
S: Hiwaayadda iyo aqoonta Kartuunka, goormaad gaartay?
J: Marka hore waxa muhiim ah hal abuurka fikirka, ka dibna waxaa imaanaya farsamdii la adeegsan lahaa. Taas oo badanaaba laga dhaxlo waayo-aragnimada howsha mudada aad ku dhex jirto. Adeegsiga Kartuunka waxaan bilaabay mar aan tababar ahaan ula joogay Wasaaradda Warfaafinta, sanndihii 1970-1971kii. Xilligaas oo aan dhihi karo dowladdii Militariga waxay xoogga saartay dhinaca baraarujinta bulshada, gaar ahaan Brobaangada iyo Kicinta dadweynaha.
Waxaa jiray baahi weyn ee dhinaca farshaxanka, sida warqad derbiyeedyo (Posters), Boorar waaweyn iyo hal-ku-dhigyo waddooyinka magaalada lagu dhejiyo. Anigu waxaan dhihi karaa meeshaas ayaan ka helay waayo-aragnimo weyn. Maxaa yeelay, waxaan fursad u helay in aan sawiro farshaxanno badan, hadday tahay boorarka aan soo xusay, Sawiro hiddaha iyo dhaqanka oo lagu soo bandhigay dalka gudihiisa iyo dibeddaba, waxaan helay waayo-aragnimo aqoonyahaano dibadda laga keenay oo dalka ka shaqeynayey, kuwaas oo lahaa kuwa wadamada Carabta, Kuuriya, Talyaaniga iyo Midowga Sofeeti.
S: Miyaad Kartuunka u aragtaa aalad casri ah ee dadka wax lagu gaarsiyo?
J: Ujeedadu waxay tahay gaarsiintu in ay noqoto mid wax ku ool ah oo dhaqso loo fahmo. �Sawirku waa gabay aamusan� waxaa yiri Hadraawi. Laba arrimood ayaa muhiim ah: tan 1aad waa in aad hesho dareen ahaan wax kuu muuqda; tan 2aadna waa in aad dareenkaas sawir muuqda oo dadka kale kula arki karaan u beddesho. Halkan waxaan kaalin muhiim ah cayaaraya farsamada Kartuunka. Wax badan ayaan farshaxan ahaan dunida iyo Soomaalidaba ugu muujiyey dhibaatada dagaalka sokeeye, qaab sawir �Kartuun�. Dhowr bandhig ayaan ka sameeyey magaaladda Jabuuti. Kii ugu dambeeyey waxaan ku dhigay Hotel Sheraton oo ay ka soo qaybgaleen Safaarado iyo Hey�ado caalami ah. Xilligaas oo ku soo beegmay Shirkii Carta lagu qabtay ee heshiisiinta Soomaaliya oo aan ku muujinayo dhibaatada dalka Soomaaliya. Halkaas waxaa lagu iibiyey wixii sawir ahaa oo aan sameeyey. Dadka gadanayey waxay u badnaayeen shisheeye. Wixii dakhlii ka soo baxay waxaan ugu deeqay shirka laftiisa.
S: Fikradaha aad sawirto sidee kuugu dhashaan?
J: Iskama timaado! Waxay ka tarjuntaa dhacdo aad markaas kuu muuqata, ka dibna dareenka ayaa kugu hoggaamiya in aad sidaas u sawirto. Mudnaanta ugu weyni waa in qofka fiirsanaaya ama aqrisanaaya uu si fudud u helo nuxurka iyo ujeedada. Waxa doorka weyn ciyaara waa xogta iyo waayo-aragnimada aad ka haysato waxaad gudbineyso.
S: Inaad sidaan caan ugu noqonayso Kartuunka, ma filaysey?
J: Maya, ma filayn. Wixii aan jeclaa wax kale ayeey ahaayeen, laakiin koleyba kama fogeyn fanka laamihiisa kale, waxaana u malaynayaa in aan u dhammaan doono filim sameyn xagga Kartuunnada ah. Waxaan maanka ku hayaa in aan mar uun gaaro soo bandhigga filim Kartuun (Animated Cartoon) ah oo ku saabsan wejiga dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya.
Sawirada Amiin Caamir: HALKAAN RIIX
Ama websitekiisa www.AminArts.com